13 Hunhu hweSigma Vanhurume Hunovaisa Pakati Pazororo - Blog
13 Hunhu hweSigma Vanhurume Hunovaisa Pakati Pazororo
'Sigma munhurume' inogona kunge isiri izwi raunoziva iwe, asi iwe unogona kunge uchiziva hunhu hweimwe - kungave kushamwari kana mauri iwe!
Vazhinji vedu ita zvisingatarisirwi kutonga nezve alpha vanhurume (vanozvitutumadza uye vakadzvinyirirwa) uye beta zvakaipa (anonyara uye anozivisa), kunyangwe izvi zvisiri izvo nguva dzose.
Asi zvakadii nezve sigma varume? Chii chinovasiyanisa?
Chii chinonzi Sigma Male?
Zvichitaurwa zviri nyore, haungakwanise kunongedza sigma murume pakarepo.
Ivo havasi mhando yepikoko yakatenderedza, uye zvakare havakwanisi kumanikidzwa kukona vachiedzesera kunge vasipo.
Ivo vanowanzo kungofara kuve ivo pachavo uye vachienderera mberi nezvinhu zvavo, izvo zvinoreva kuti ivo havanyatso kumira.
Fungidzira chiyero chehunhu - alphas ndomumwe mugumo weiyo spectrum uye zviri nyore kuziva mabheta ari kune rimwe divi uye, zvakanyanya sezvavanenge vachiedza kuvanza, zviri nyore kuona.
Sigmas? Vanovanda zvishoma zvisinganzwisisike pakati…
1. Mupanduki pasina chikonzero - sigma varume havasi kunyatsoenderana. Kwete nekuti ivo vanoda kuve neimwe nzira uye kumira kunze, asi nekuti ivo vane sarudzo - uye ivo vari kushandisa zvakanyanya rusununguko irworwo.
Alfa varume vanowanzoita zvinhu zvekuratidzira, sekuzvimaka 'mukomana akaipa,' asi sigmas vachingozviita nekutadza.
2. Unoita iwe - uyu mukomana haanyanyo kunetsekana nezvekuve muchikwata kana muboka. Panzvimbo iyoyo, ivo vari kufara kuita yavo vega zvinhu uye kufora kune kurova kwedhiramu ravo vega.
Betas vangave vachifara kutora chinzvimbo chekuzviisa pasi nekuti ivo vanowanzo kuve vanomisikidzwa, asi sigmas zvechokwadi havana hanya!
sei tichichema kana tasuwa mumwe munhu
3. Varume vasinganzwisisike - sigma varume vanowanzo shamisa. Nekuti ivo havadi kuenderana kana kumira kunze, ivo zvakavanzika zvakakwana.
Iwe haugone kuzviziva, izvo zvinongokuita kuti ude kutonyanya ... Unogona kungofungidzira kuti edza-dzakaoma alphas inofanirwa kunzwa sei pamusoro padzo.
4. Kuenda kunopesana nezviyo - kupesana nemitemo hakusi kuyedza kumira kana kuva mupanduki wesigma male. Iyo ingori nzira yekushandisa rusununguko rwavo uye kushayikwa kwavo kwekutarisira kana zvasvika pakukodzera.
Betas vanowanzo nyara kutarisisa uye vanoda kusanganisa kumashure nekusagadzikana - iyi haisi iyo kesi kune sigma vanhurume, sezvo ivo vachingoda yavo yega nguva.
ndiani lil durk kudanana
6 Dzidziso dzenhema Vanhu Vazhinji Vane Nezve Beta Varume
6 Hunhu hweVanhu Vanoyevedza
5. Kurarama zvine ngozi - mhando iyi yemurume inowanzoita zvavanoda. Izvi zvinobatana nepfungwa dzavo dzekuva munhu wavo uye kwete kutevedzera.
Saka nekudaro, ivo vanowanzo sangana sevasina hanya - uye nechikonzero chakanaka! Kuita zvinopesana neyakajairika dzimwe nguva kunoreva kuenda kunopesana nemutemo. Chenjerera izvi fellas…
6. Netsaona abstract - sigma vanhurume vanozivikanwa nenyaya yekuti vanoedza kusanganisa mukati (izvi hazvina kufanana ne 'kukodzera mukati'). Pane kudaro, vanomira zvakanyanya kunyanya nekuti vanoita kunge vasinganzwisisike.
Beta varume vanogona kuita nepavanogona napo kuenderana, alphas inoda kuve pamusoro wepakeji, uye sigmas zvisingaite kunyange kubvuma iyo pack.
7. Kuzvimiririra murume - mhando yemurume iyi haina kuvimba nevamwe vanhu. Izvi hazvireve kuti ivo havana hanya neshamwari dzepedyo, mhuri, kana vadikani. Izvo zvinongoreva kuti vanhu vari vazhinji vechikamu chinowirirana chehupenyu hwavo pane iko kwekupedzisira tarisiro.
Panzvimbo pekuvimba nevamwe vanhu, vanoenderera nehupenyu hwavo.
8. Vanofunga zvakadzama - sigma vanhurume vanowanzo kuve nepfungwa dzinoongorora, verenga: vanofungisisa! Vari akangwara kwazvo , saka funga zvinhu kuburikidza uye nyatsosvika pasi kune nitty gritty.
Ivo vanogadzira nzira dzeku nzvenga mutambo uye kutarisisa, kuzvichengeta zvakavanzika uye, chokwadika, zvakavanzika…
9. Kukuvadza chimiro - varume verudzi urwu vanonakidzwa nenguva yavo yekunyarara. Kunyarara zvirokwazvo igoridhe kune aya machinda, uye vanonakidzwa nguva yega .
Ivo vanofara zvakakwana kuve mune yekugadzika yeboka chero iyo yekuisa haina kunyatsodiwa. Saka nekudaro, chero mipiro yavanopa yakakodzera kuteererwa.
Ivo havana kunyarara nekuda kwekunyara kana kusagadzikana, ivo havangodi kutambisa simba pane chimwe chinhu chisingabatsiri.
Izvi zvinonyatsovasiyanisa kubva kune akajairwa maalpha echirume avo vanofarira kutuka maseru nzira yavo muhurukuro.
10. Smart cookie - izvi zvinobata maitiro avo ekuongorora, uye zvinotsanangudza zvakanaka. Rudzi rwemhumhi iri yega inogara iine nzara yeruzivo, ingave yechokwadi kana hunhu nezvevezera rake.
kusiiwa kunze kwezviitiko zvemhuri
Sigma vanhurume vanowanzo kuve vakangwara zvakanyanya sezvo vaine pfungwa dzinoda kugaya marudzi ese eruzivo - vanowanzove neyekurangarira kwakasimba kwechokwadi uye manhamba, asi vanogona kuverenga chero munhu kubva pakuona kamwe chete.
Ivo havasati senge vepamoyo vanoziva sevazhinji beta varume, asi ivo vawana kunzwisiswa kwakanaka kwazvo pahunhu hwevanhu uye manzwiro nekungovaona.
11. Yakasimba, yakanyarara mhando - sigma vanhurume vane ungwaru, sezvakakurukurwa, asi vazhinji vacho vanoshaya iyo magariro yealpha varume. Simba ravo rakawanda rinoshandiswa kuongorora mamiriro uye kutora ruzivo, saka hapasi pese pakawanda mukana wehunyanzvi hwemagariro.
Izvi hazvireve kuti ivo vanofinha kuve varipo, kungoti iwe haugone kutarisira hunhu hwakafanana iwe hwaunowana nealpha.
12. Inonakidza uye inokatyamadza - sigmas anogara achitarisa zviitiko zvitsva neruzivo. Pfungwa dzavo dzinogara dziine nzara yezvinhu zvitsva, saka vane nzira dzavo dzekuziva zvakawanda nezvevamwe vanhu.
Izvi zvinongowedzera kumhepo yavo yezvakavanzika uye zvinoita kuti zvinyanye kutaridzika kune vakawanda vakadzi. Ivo vanowanzo sanganisa iyo inofungidzirwa kuzvikudza kwema alphas (kunyange zvisiri pachinangwa!) Nerunyararo rwe beta varume.
13. Mapere ari ega - zvakare, sigma vanhurume havadi kuve mune chero rudzi rwepakeji. Ivo havadi kutevedzera chero munhu uye ivo zvechokwadi havadi vanhu vanovatevera.
Nepo betas ari anofara kupfuura kutevera mumumvuri wemumwe munhu uye alphas ari kufara achitungamira nzira, sigmas akatsiga kufuratira izvi zvepfungwa uye ingoenderera nazvo.
ndeipi miganho yekuisa muhukama
ndakakanganisa hupenyu hwangu manje chii
lisa "nyanga dzenzou" moretti
dombo nemurume anotonga
anga achinyepa kwandiri